Al-Amriki oo ka badbaadey isku day dil oo lagu doonayey inay ku Khaarijiyana+SAWIRO – SBC
Al-Amriki oo ka badbaadey isku day dil oo lagu doonayey inay ku Khaarijiyana+SAWIRO
Posted by editor on April 26, 2013 Comments
Omar Xamaami oo loo yaqaan Abu Mansour al-Amriki, oo ah nin Mareykanka u dhashay kana mid ah xubnaha ugu sareeya ee ka tirsan Al-Qaacida ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in uu ka badbaaday isku dil oo ay ku doonayeen xoogaga Shabaabku inay ku Khaarijiyaan.
Abu Mansour al-Amriki ayaa warkan ku cadeeyey barta uu ku leeyahay Internet-ka Twitter-ka waxaana uu ku sheegay in rasaastii lagu soo riday ay gaarsiiyey dhaawacyo kala duwan sida uu sheegay.
Abu Mansour al-Amriki, waxaa kale oo uu soo galiyey Twitter-ka sawirada dhaawac ka soo gaaray weerarka lagu soo qaaday isagoo sheegay in xabadihii lagu soo riday oo ahaa nooca Baastooladaha ay ka haleeleen qoorta ama luqunta.
Warkan dhaawaca Abu Mansour al-Amriki, wuxuu soo galiyey Twitter-ka habeenimadii khamiista, wuxuuna fariintii ugu horeysay ku yiri:
“Goordhaweyd ayaa qoorta waxaa iga toogtey Al-Shabaab, wuxuu ahaa fal fal khaarijin ah, laakiin xaaladeydu ma ahan mid culus”.
Dhiig ka qubanaya qoorta Al-Amriki
A-Amriki, mar kale fariin kale soo galiyey Twitter-ka isagoo sheegay qaabka uu u dhacay weerarka, meeshii uu ku sugnaa iyo waliba nooca hubka loo adeegsaday weerarkiisa:
“Waxaan fadhiyey maqaaxi shaah sadex xabadood ayaa dhanka dambe ee bidix iga haleeshay, waxay ahayed Baastoolad ayaan filayaa, wayna carareen”.
Al Amriki oo dhiigii ka daatay sawirkiisa soo galiyey Twitter-ka
Abu Mansour al-Amriki, ayaa mudooyinkii ugu dambeeyey wuxuu si weyn u muujinayey walaaca uu ka qabo amnigiisa, isagoo dhawr mar fariimo uu soo diray ku sheegay in uu ka walwal qabo in Shabaabku ay dilaan.
Al-Amriki wuxuu ka mid yahay xubnaha Al-Qaacida ee sida weyn u adeegsada aalada Internet-ka gaar ahaan wuxuu si joogto ah fariimo ugu soo qoraa bogga Internet-ka, laakiin lama oga ilaa iyo haatan meesha uu ku sugan yahay oo si qarsoodi ah ayuu ugu nool yahay Soomaaliya inkastoo la xaqiijiyey in uu guursadey Haweenay Soomaali ah ayna isku dhaleen caruur aan cadadkooda la hubin.